Forex waa la xiray? Waxaan ka ganacsanaa waxyaabaha loo yaqaan cryptocurrencies maalmaha fasaxa ah. | vfxAlert official blog
Forex waa la xiray? Waxaan ka ganacsanaa waxyaabaha loo yaqaan cryptocurrencies maalmaha fasaxa ah.
Dhammaadka usbuuca ama ciidaha? Qof kastaa wuu nasan yahay oo ganacsatada baayacmushtarka sidoo kale, maxaa yeelay lacagta iyo suuqyada saamiyada ayaa xidhan. Hagaag, u daa inay nastaan, waan ognahay laakiin sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' .
Dhibaatada ugu weyn ee calaamadaha ganacsiga ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa boqolkiiba hooseeya ee faa'iidada macaamilka. Istaraatiijiyad kasta oo maaraynta lacagta ah, waa inay ahaataa ugu yaraan 75-85%, haddii kale, suurtagal noqon mayso in magdhaw laga bixiyo calaamadaha binary ee bilaashka ah ee qaab la aqbali karo. Mise si isdaba joog ah ayey isu beddeleysaa iyadoo ballaaran!
Beddelka ayaa noqon kara Crypto IDX - synthetic (derivative) hantida cryptocurrency ee Binomo:
Sida lacagaha kale ee dhijitaalka ah ayaa la heli karaa iyada oo aan maalmo fasax la helin iyo ciidaha;
Boqolleyda calaamadaha binary gawaarida macaashku waa xasilloon yahay 83%, ikhtiyaar ka yimid 1 dollar. 2da soo socota ee ikhtiyaarrada waxtarka leh ayaa ku filan inay daboolaan luminta, taas oo aan dhibaato ku ahayn xitaa xeeladaha muddada-gaaban;
Waxaa loo xisaabiyaa celceliska qiimaha afar lacagood: Seeraar, Ethereum, Litecion iyo ZCash. Marka, saadaalinta mala awaalka ah waa “la sifeeyay” waxaana la sameyn karaa saadaalino la isku halleyn karo.
Mabda'a xisaabinta wuxuu la mid yahay indices stock (Dow Jones, S&P 500). Haddii hantidu ka soo xigato CALL-option-ka kor u kaca, PUT-ikhtiyaar hoos ugu dhaca.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa hal tilmaame caadi ah iyo laba nooc oo calaamadaha cryptocurrency oo laga helo adeegga vfxAlert .
Bollinger Bands (BB) - jihada jiifka ah ee khadadka BB wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka guri, burburka khadadka ayaa noqon doona calaamadda binary ee dhammaadkeeda. Haddii baaxaddu ballaadhan tahay, waad furi kartaa xulashooyin aad dib uga laaban karto xuduudaha. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
'Cidhiidhiga' kanaalka qiimaha Bollinger Bands, ayay u badan tahay suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog badani ka dib dhammaystirka dhismaha. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xudduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood, haddii kale, ikhtiyaarrada ayaa noqon doona mid aan faa'iido lahayn, xitaa haddii calaamadaha binary ee bilaashka ah ay muujinayaan jihada saxda ah;
Calaamadaha isbeddelka iyo dib u noqoshada ee vfxAlert. Waxay ka shaqeeyaan tilmaamayaasha isbeddelka caadiga ah ee leh tirakoobyada taageeraya. Sidaa darteed, looma baahna aalado dheeri ah oo ku saabsan jaantuska waxaanan eegeynaa rogista ama sii socoshada isbeddelka kaliya iyadoo lagu socdo "waddada qiimaha" ee Bollinger.
Mar labaad, waxaan ku xusuusineynaa in xulashooyinka la furay markii isbeddelka hadda socda uu ku dhammaado sicir la xaqiijiyay oo la xaqiijiyay.
Ikhtiyaar CALL. Badanaa calaamadaha vfxAlert waxay muujinayaan dib udhac iyo bilowga kor u kaca. Bollinger wuxuu ka socdaa xadka hoose ama khadka dhexe. Xulashada labaad waxaa kaliya loogu talagalay ganacsatada xirfadleyda ah!
Dooro door. Xaaladaha iska soo horjeeda - inta badan calaamadaha vfxAlert waxay muujinayaan dib u noqosho iyo bilowga hoos u dhaca. Bollinger wuxuu ka degaa xadka hoose ama khadka dhexe.
Shardi kale waa dulqaad. Waxaad isku dayi kartaa inaad gasho shumaca koowaad ee midab kale, laakiin waxaa fiican inaad sugto calaamadaha binary oo buuxa . Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa inuu ahaadaa ugu yaraan 5-7 daqiiqo, xitaa haddii daqiiqad loo xusho inay tahay waqtiga shaqada, sida fiidiyowgeena.
Aynu soo koobno : d si kasta oo ay u yartahay ka faa'iideysiga marka la barbardhigo lammaanaha lacagta iyo hantida saamiyada, cryptocurrencies waa aalad ganacsi oo dhab ah oo siinaysa faa'iido wanaagsan oo deggan.
Bitcoin waxay aasaas u noqon doontaa calaamad kasta oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah . Lacagaha kale ayaa soo raaca, in kasta oo dib u dhac ku yimaado. Marka laga reebo Ethereum - waxaa jira dib u celin celin iyo sixitaan. Tani caadi ahaan waa kiiska markii la daabacayo dhacdooyinka muhiimka ah ee ku saabsan lacagta, falalka mala awaalka ahi waa kuwa muddo gaaban soconaya oo aan dhici doonin.
Binomo wuxuu leeyahay sumcad inuu yahay dillaal lagu kalsoon yahay wuxuuna bixinayay Crypto IDX dhowr sano hadda. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa lagu furay daahitaanno ugu yar, ma jiraan wax dhibaato ah oo laxiriirta macaashka oo ganacsade kastaa wuxuu heli karaa dakhli dheeri ah iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo istiraatiijiyadda iyo qaabka ganacsiga.